Jiro tapaka, rano tsy mandeha: nesorina ny tale jeneralin’ny Jirama, i Jaomiary Aimé Olivier | NewsMada
Jiro tapaka, rano tsy mandeha: nesorina ny tale jeneralin’ny Jirama, i Jaomiary Aimé Olivier
Tinapaka nandritra ny filankevitry ny minisitra, ny alarobia 14 aogositra teo, ny fanafoanana ny didim-panjakana laharana faha-2017-296, ny 26 avrily 2017, nanendry ny tale jeneralin’ny Jirama, i Jaomiary Olivier Aimé. Nandroso ity soso-kevitra ity ny minisitry ny Angovo, ny rano ary ny akoranafo, ary neken’ny filoham-pirenena sy ny minisitra niara-nivory taminy.
Dingana lehibe eo anivon’ny Jirama ity fanapahan-kevitra ity, satria maro ny zava-mitranga ao. Tsy ampy ny famatsian-drano eto an-dRenivohitra sy ny manodidina, efa andro maro izao. Anisan’ny voalaza fa antony, ny fahasimban’ny fitaovana eny Mandroseza, foibe mpamatsy rano eto an-dRenivohitra. Lazaina fa tsy ampy koa ny tanjaky ny herinaratra. Niverina tapatapaka koa ny herinaratra eto Antananarivo, indrindra amin’ny fiafaran’ny tolakandro.
Etsy ankilany, namoaka vaovao ny tompon’andraikitry nyJirama, mikasika ny fanodinkodina-mbola sy/na fitaovana nataon’ny mpiasa, mitotaly 500 tapitrisa Ar.
Havaozina ny fifanarahana
Manampy ireo, maromaro ny fanehoan-kevitry ny filoham-pirenena sy ny minisitry ny Angovo sy ny rano ary ny akoranafo. Voalaza fa tsy maintsy hiverenana hodinihina ny fifanarahan’ny Jirama amin’ireo orinasa tsy miankina. Ao anatin’izany ny famatsiana herinaratra, satria lafo loatra ny hividianan’ny Jirama azy, nefa tsy maintsy amidy mora amin’ny mpanjifa. Misy koa ny fatrana herinaratra tsy maintsy efain’ny Jirama na tsy nolaniany aza. Mamono antoka ny Jirama avokoa izany, nefa tsy tokony hanampy ara-bola azy intsony ny fanjakana, amin’ny taona 2020, araka ny fifanarahana amin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena, toy ny FMI, ohatra. Mamatsy vola ity orinasa ity koa ny Banky iraisam- pirenena, ao anatin’ilay fandaharanasa Pagose.
Tantanina toy ny orinasa tsy miankina
Farany, nanamafy ny fanjakana foibe, araka ny filankevitry ny minisitra, ny herinandro lasa teo, talohan’ity natao ny 14 aogistra ity, fa tsy maintsy tantanina toy ny orinasa tsy miankina ny Jirama. Midika ve izany fa dingana iray mankany amin’izany fepetra izany ny fanesorana ny tale jeneraly? Tena hivaha tokoa ve ny tsy fahampian-drano sy ny fahatapahan-jiro izay miverina indray eto an-dRenivohitra amin’izao fotoana izao?